Somaliya oo markii ugu horeysay dib u bilaabi doonta boostada dibedda - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Somaliya oo markii ugu horeysay dib u bilaabi doonta boostada dibedda
Somaliya ayaa markii ugu horeysay dib u bilaabi doonta boostada dibedda kadib burburkii ku yimi dadka iyo dalkaba. Somaliya ayaa ka mid ahayd wadamada ugu horumarsan dhinaca boostada burburka kahor.
Wasaaru dawladaha, Mudane C/laahi Bile Nuur, oo soo jeediyay qorshaha wasaaradda ee dhinaca boostada ayaa sheegay in bishii Luulyo ee sanadkan ay wasaaraddu la soo saxiixatay Boostada Jabuuti heshiis wada-shaqeyn ah oo dhex maraya Boostada Soomaaliya iyo midda Jabuuti.
Sanadkii 2013-kii ayaa la billaabay in la keeno boostada ka imanaysa dibedda, hase yeeshee ma suurtogelin in dibedda loo diro boostada ka baxaysa dalka.
“Ciwaanka kaliya ee Soomaaliya ka jira waa sanduuq boosto, waxaana u baahan shirkadaha, macaamiisha bankiyada, jaamacadaha iyo xafiis kasta. Waxaan dooneynaa inaan isbeddel weyn ka sameyno qaabka ay u shaqeyso Boostadu ayuu yiri wasiirka.
Wuxuu intaa raaciyay in ay astaan u tahay dawladnimada iyo ilbaxnimada, waxayna fududeysaa adeegyada ganacsiga iyo dawladdaba.
Haddaba waxaan dadweynaha ku wargelineynaa inay u diyaar garoobaan isbeddelada cusub ee lagu sameyn doono Boostada Qaranka” ayuu hadalkiisii ku soo gagabeeyay wasiir Bile.
Dhinaca kale guddiga Dhaqaalaha ee Golaha Wasiirrada ayaa go’aamiyay in dhammaan wasaaradaha xukuumaddu ay faraan shirkadaha iyo hay’adaha is-diiwaangelinaya ama cusbooneysiinaya rukhsadaha inay la yimaadaan caddeyn muujineysa inay leeyihiin sanduuq boost.